Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » I-Airbus ibhengeza uhlobo lwayo lokuqala lwe-eco-wing
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Iphiko langomso, elixhaswe ngemali yi-Aerospace Technology Institute yase-UK, yinkqubo ye-Airbus ehambelana ngokupheleleyo namahlakani kunye namaqela kwiindawo ze-Airbus zaseYurophu, kuquka iBremen eJamani, apho iqela le-'Wing Moveables 'lisekwe. Ababonisi bamaphiko abathathu baya kudibanisa ngaphezulu kweetekhnoloji ezintsha ze-100 ukuphonononga iindlela ezintsha zokuvelisa kunye nendibano ngeenjongo zokwenza ukuba uhambo ngenqwelomoya luzinze.
'Iphiko Langomso' lifikelela kwinqanaba eliphambili ngokudibana kwephiliphu yokuqala yobukhulu bayo.
Inkqubo entsha ye-Airbus iya kuphucula ukuqonda kokuveliswa kwamaphiko kunye noshishino.
Amaphiko amathathu obukhulu obupheleleyo aya kwenziwa ngokupheleleyo phantsi kwenkqubo 'yePhiko leNgomso'.
'Iphiko Langomso', inkqubo ephambili yophando ye-Airbus kunye netekhnoloji, ifikelele kwinqanaba eliphambili kunye nendibano yohlobo lwayo lokuqala olugcweleyo.
Inkqubo yePhiko yangomso ayizukuvavanya kuphela izinto ezihlanganisiweyo zamva nje kunye nobuchwephesha obutsha kubuchwephesha bomoya kunye nokwakhiwa kwamaphiko kodwa, okubalulekileyo, kuphonononge ukuba ukuphuculwa kwamaphiko kunye nokwenziwa kwamashishini kungaphuculwa njani ukuhlangabezana neemfuno ezizayo njengoko icandelo liphuma kwindyikitya yokufa.
Amaphiko amathathu obukhulu obupheleleyo aya kwenziwa ngokupheleleyo: inye iya kusetyenziswa ukuqonda ukudityaniswa kweenkqubo; umzuzwana uza kuvavanywa ngokwendlela ukuthelekisa ukuthelekisa imodeli zekhompyuter, ngelixa isithathu siza kudityaniswa ukuvavanya imveliso yokwandisa kunye nokuthelekisa ngokuchasene nemodeli yoshishino.
USabine Klauke, Airbus IGosa eliyiNtloko lezobuGcisa, lithe: “Iphiko Langomso, icandelo elibaluleke kakhulu kwipotfoliyo ye-R & T ye-Airbus, iyakusinceda ukuba sivavanye ukwenzeka kwemveliso kwimveliso yephiko elizayo. Itekhnoloji esebenza kakuhle yamaphiko sesinye sezisombululo ezininzi - ecaleni kwamafutha endalo okuzinzileyo kunye nehydrogen - sinokuyiphumeza ukufaka isandla kumnqweno wokubhabha ngenqwelomoya. Iphiko laNgomso ikwangumzekelo wendlela ukusebenzisana kwamashishini amakhulu kuya kubaluleka ekuphumezeni i-ajenda yecandelo lethu kwikamva elizinzileyo. ”
Iphiko Langomso, elixhaswe ngemali yi-Aerospace Technology Institute yase-UK, yinkqubo epheleleyo ye-Airbus ebandakanya amaqabane ehlabathi kunye namaqela kwiindawo ze-Airbus zaseYurophu, kubandakanya Bremen eJamani, apho iqela 'lePhiko eliShukumayo' lisekwe. Ababonisi bamaphiko abathathu baya kudibanisa ngaphezulu kweetekhnoloji ezintsha ze-100 ukuphonononga iindlela ezintsha zokuvelisa kunye nendibano ngeenjongo zokwenza ukuba uhambo ngenqwelomoya luzinze.
Indibano encinci yokhuseleko lwephiko olwenzekileyo kwindawo yeAirbus 'yaseFilton, eNgilane, yenziwe kwiZiko leSizwe eliDibeneyo eBristol. Isigqubuthelo sephiko kunye necandelo eliphambili le-GKN Aerospace- iFixed Trailing Edge - zisiwe kwiziko loPhando oluPhucukileyo lwezeMveliso, eWales, kwiziko lemveliso yamaphiko eAirbus eBroughton, eFlintshire, ukuze kuqale indibano.